Akụkọ - Mmelite ahụ ọkụ Swine Afrịka: Mmalite ọrụ ugbo Vietnam na-akpaghị aka na ụzọ mgbake
Azụ anụ ezi nke Vietnam na-aga n'ụzọ dị ngwa iji nwetaghachi.Na 2020, ọrịa ezì nke Africa (ASF) na Vietnam kpatara ọnwụ nke ihe dịka 86,000 ezì ma ọ bụ 1.5% nke ezì ndị na-ekpo ọkụ na 2019. Ọ bụ ezie na ntiwapụ ASF nọgidere na-aga n'ihu, ọtụtụ n'ime ha. ha na-adị obere oge, dị obere ma nwee ngwa ngwa.
Ndekọ ọnụ ọgụgụ gọọmentị na-egosi na mkpokọta anụ ezi na Vietnam bụ isi nde 27.3 ka ọnwa Disemba 2020, ihe dịka 88.7% nke ọkwa ASF tupu.
"Ọ bụ ezie na mgbake nke ụlọ ọrụ ezì Vietnam na-aga n'ihu, ọ erubeghị ọkwa ASF, ebe ọ bụ na ihe ịma aka na-aga n'ihu na ASF ka dị," ka akụkọ ahụ kwuru. "A na-ebu amụma mmepụta anụ ezi nke Vietnam ga-aga n'ihu na-agbake na 2021, na-eduga n'ịchọ ala maka mbubata anụ ezi na anụ ezi karịa na 2020."
A na-atụ anya na anụ ezi nke Vietnam ga-eru ihe dị ka nde isi 28.5, na ọnụ ọgụgụ ịgha mkpụrụ na 2.8 ruo 2.9 nde isi site na 2025. Akụkọ ahụ gosiri Vietnam na-achọ ibelata oke nke ezì na ịbawanye oke nke anụ ọkụkọ na anụ ụlọ n'ụdị anụ ụlọ ya. Site na 2025, a na-ebu amụma mmepụta anụ na anụ ọkụkọ ga-eru 5.0 ruo 5.5 nde metric ton, na anụ ezi na-aza 63% ruo 65%.
Dabere na akụkọ Rabobank nke March 2021, mmepụta anụ ezi nke Vietnam ga-abawanye site na 8% ruo 12% kwa afọ. Nyere mmepe ASF dị ugbu a, ụfọdụ ndị nyocha ụlọ ọrụ na-ebu amụma na igwe ezì Vietnam enweghị ike ịgbake kpamkpam na ASF ruo mgbe 2025 gachara.
Afe nke New Investments
N'agbanyeghị nke ahụ, akụkọ ahụ gosiri na na 2020, Vietnam hụrụ nnukwu ego itinye ego na mpaghara anụ ụlọ n'ozuzu yana na mmepụta ezì na-enwetụbeghị ụdị ya.
Ọmụmaatụ gụnyere ubi anụ ezi atọ nke New Hope dị na Binh Dinh, Binh Phuoc, na mpaghara Thanh Hoa nwere ikike ịgha mkpụrụ 27,000; Mmekọrịta dị n'etiti De Heus Group (Netherlands) na Hung Nhon Group iji mepụta netwọk nke nnukwu ọrụ ọmụmụ na Central Highlands; Japfa Comfeed Vietnam Co., Ltd.'s hi-tech hog farm na Binh Phuoc Province nwere ikike nke 130,000 na-emecha otu afọ (nke ya na ihe dị ka 140,000 MT anụ ezi), na ogbugbu na nhazi nke Masan Meatlife na Long Province. ike kwa afọ nke 140,000 MT.
"N'ịmara, THADI - onye enyemaka nke otu n'ime ndị isi ụgbọ ala Vietnam Truong Hai Auto Corporation THACO - pụtara dị ka onye ọkpụkpọ ọhụrụ na mpaghara ọrụ ugbo, na-etinye ego na ugbo ndị na-azụ anụ ezi na mpaghara An Giang na Binh Dinh nwere ikike nke 1.2 nde hogs kwa afọ,” ka akụkọ ahụ kwuru. "Onye isi na Vietnam na-emepụta ígwè, Hoa Phat Group, tinyekwara ego n'ịmepụta ahịrị ọnụ ahịa FarmFeed-Food (3F) yana n'ugbo mba niile iji nye ezi ndị nne na nna na-azụ anụ, ezì na-azụ ahịa azụmahịa, hogs dị elu nwere ebumnuche nke ịnye ezì azụmahịa 500,000 kwa afọ. gaa n'ahịa."
“A naghị achịkwa ụgbọ njem na ịzụ ahịa ezì, na-eke ohere maka ntiwapụ nke ASF. Ụfọdụ ezinụlọ ndị na-azụ anụ ezi ndị dị n'etiti etiti Vietnam atụbawo ozu ezì n'ebe ndị na-enweghị nchebe, gụnyere osimiri na ọwa mmiri, nke dị nso na ebe ndị mmadụ bi, na-ebuli ohere nke mgbasawanye ọrịa ahụ, "ka akụkọ ahụ kwuru.
A na-atụ anya na ọnụ ọgụgụ nke mmụgharị mmadụ ga-aga n'ihu, tumadi na ọrụ ezì ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ebe ntinye ego na nnukwu, teknụzụ dị elu na ọrụ ugbo ezì jikọtara ọnụ akwalitela mgbake na mgbasawanye nke ìgwè ezì.
Ọ bụ ezie na ọnụ ahịa anụ ezi na-agbada, a na-atụ anya na ọnụ ahịa hog ga-adị elu karịa ọkwa ASF n'oge 2021, nyere ọnụ ahịa ntinye anụ ụlọ na-arị elu (dịka nri, anụ ezi) na ntiwapụ ASF na-aga n'ihu.
usoro nri ụlọ ọkụkọ, nri ezi, Pad jụrụ oyi, Ihe mkpuchi mkpuchi griin haus, anụ ọkụkọ feeder, Sistemụ nri anụ ọkụkọ,